CAAFIMAADKA - DARYEELKA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
CAAFIMAADKA - DARYEELKA
Publicerat torsdag 31 augusti 2006 kl 08.59
Hoowlo daryeel ee dawladeed mise kuwo gaar loo leeyahey?
Caafimaadka iyo daryeelka dhallaanka iyo waayeelka ayaa dalkan Iswiidhen waxey yihiin kuwo ey masuuliyaddeedu saaran tahey dawladda ( degmooyinka iyo gobollada) islamarkaana lagu miisaaniyad geliyo dhaqaalaha ka soo gala cashuuraha.
Miisaaniyadda ku baxda ayaa ah mid aad u badan. Dhanka caafimaadka oo keliya ayaa sannad walba waxaa ku baxda lacag gaareysa 40 milyaardi oo koron.
Xisbiga Socialdemokrat-ka iyo kan Bidixda ayaa aad ugu dheggen fikirkooda la xiriira in aan goobaha caafimaadka gacanta aaney u gelin heyado dantoodu tahey macaash. Kolka laga hadlayo xisbiyada mucaaradka ee midigta iyo xisbiga Cimilada – ayaa dooneya tiro intaa ka badan ee shirkadaha gaarka loo leeyahey ee caafimaadka. Sida ey rumeeysan yihiin waxey middaasi hagaajineysaa goobaha daryeelka caafimaadka iyo kala doorashadooda.
Xisbiga haya talada dalka (s) ayaa isaguna ku qaboojiyey cashuurtaa halkii ey taagneyd sannadkii 2005-ta in muddo gaareysa laba sannadood, hase yeeshee ey khidmaddaasi tahey mid khasnadda dawladdu aaney ka maarmin halkeediina ka sii socon doonta. Xisbiyada midigta ayaa ku dhawaaqey horraantii iney baabi’in doonaan khidmadda laga qaado ra’sumaalka aan guurin, hase yeeshee di buga sheegey iney qaboojin doonaan sida xisbiga Socialdemokrat-ka, inkasta oo ey dabadeed ku adkaadey arrinkaasi sidii lagu miisaaniyad gelin lahaa. Xisbiga burjuwaasiga ee Moderat-ka ayaa soo jeediyey in middaasi lagu maalgeliyo iyada oo la jaro waxa loo yaqaan ”räntaavdrag” dulsaarka la soo celiyo xisaabxirka sannadka, iyadoona maalin kadib uu xisbigu arrinkaa di buga noqdey. Go’aanka ugu dambeeyey ee xisbiyadaa ka soo baxey wuxuu yahey in
iyo xisbiyada ey xulufada yihiin ee, v iyo mp waxey qorsheyneyan sidey in nuddo tobn sannadod ah ey sannad walba misananiyad hal miyaard oo dheeriya ey ku dhaaale gelin lahayen wayeelka. Lacatasi oo loogu tao galey sidii loogu abuuri lahaa goobo lagu xannaaneeyo waayelka, iyada oo kor loo qaado kaalmada lagu kabo guryaha ey deggen yihiin howlgabka iyo wliba daryeel caafimaad e eka wanaagsan kuwooda ugu liita.
Inta wixii dheer waxey saddexdaa xisbi doorashada ka qeybgalayaan qorshooyin kala duwan ee middaa la xiriirta. Mitaal ahaan wuxuu xisbiga Socildemokrat-ku qabaa in la abuuro goobaha xannaanadda dhalaanka ee habenkiiya, xisbiga Cimiladu wuxuu qabaa in kor loo qaado lacagta tiirka u ah mushaarrada waayelka, haka u xisbiga Bidixduna qabo in loo aburo shakhsiyaad danahooda ilaaliya dadyoowg maskaxda ka curyaaman.
Xisbiyada xulufada e midigtu waxey qabaan la miisaaniyad geliyo lacag gareysa 300 malyuun oo koron sidii lagu abuuri lahaa waxa loo yaqaan ” doorasho furan ee xor ah” ee degmooyinka. Middasi waxy gacan ka geysaneysaa sidi ey ku abuurmi lahaayen goobo gaar loo leyahey ee xannaanada dadka waaweyn. för att förbereda en så kallad ”Fritt Val–reform” i kommunerna. Wxey kaloo xisbiyadani damacsan ihiin in hal milyaard oo heri ah ey ku daran milyrdiga ey dawladda dalkani ka talisaa ku tala jiro nuu sannad walba misaaniyadooda ku daro goobaha xannaanada waayeelka.
Xisbiga Mudaraat-ka ayaa qaba fkirrada ugu adag – kuwaasina oo ey ka mid yihiin – In mar walba e shkhsigu u baahdo Farmasiiga uu bixiyo khidmad gaareysa 25 koron, in kor loo qaado saqafka daawada högkostnadsskyddet (*) yad oo laga qaadayo 1 800 lana gaarsineyo 2 000 oo koron.
Xisbiga Kristdemokrat-k ayaa qaba fikir la xiriira in ko loo qado lacagta tiirka u ah mushaarrada waayelka, islamarkan dhimo cashuurta laga qaado howlgabka.
Labada dhinac ee ku loltamaya doorashada ayaa ballan qaady haddii ey doorashada ku guuleystan iney dib u habeyn ku sameyn doonan siyasddooda la xiriirta daweynta ilkaha islamrkana ka higaya mid ka aqiisisan herk uu maanta jogo.